သဘာဝအတိုင်းလှပမြဲလှပနေစေမဲ့ NARS ရဲ့ Radiant Longwear Foundation! | CosmeticMyanmar
Home » Article » သဘာဝအတိုင်းလှပမြဲလှပနေစေမဲ့ NARS ရဲ့ Radiant Longwear Foundation!
သဘာဝအတိုင်းလှပမြဲလှပနေစေမဲ့ NARS ရဲ့ Radiant Longwear Foundation!
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ တနေကုန်လှပနေဖို့ဆိုရင်တော့ Foundation ကောင်းကောင်းကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါမယ်.. ယခုခေတ် ပျိုမေတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်တင်းပေးဖို့ရန်အတွက် NARS က Radiant Longwear Foundation လေးကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ…
ဒီ Foundation လေးဟာဆိုရင် 16 နာရီကြာအောင်ထိန်းပေးထားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် တနေကုန်အလုပ်ခွင်မှာ အလုပ်များနေသူတွေအတွက်တော့ အသင့်တော်ဆုံး Foundationလေးပါ…တခြား Foundation တွေထက်သာတဲ့ အချက်တွေကတော့ ပေါ့ပါးတဲ့အပြင် Full Coverageလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သဘာဝအတိုင်းလှပနေစေပါတယ်…ဘယ်လောက်ပဲချွေးစိုစို၊ မိုးစိုစို 16 နာရီအကြာထိန်းထားပေးနိုင်မှတော့ရန်ကုန်ရာသီဥတုမျိုးနဲ့ဆိုကွက်တိပဲပေါ့….လိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာလည်း မိတ်ကပ်လိမ်းထားသလို ထူထူထဲထဲခြောက်မနေပဲ သဘာဝအတိုင်းရေဓါတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးပါတယ်…
ရင်သပ်ရှုမောရလောက်အောင် မှေးမှိန်မသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ပျိုမေတို့တကယ်ပဲအကြိုက်တွေ့စေမှာပါ… Raspberry, Apple, watermelon အဆီအနှစ်တို့ကို Fade-resistant formula တို့နဲ့ဖော်စပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အသားအရေလေးကချောမွတ်ပြီး နူးညံ့ဝင်းပနေစေမှာပါ…Skin matching technology နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အပြင် အသားအရောင်မရွေးအသုံးပြုနိုင်အောင် ၃၃ရောင်တောင်ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အသားအရေနဲ့မကိုက်ညီမှာကြောက်စရာမလိုတော့ပါဘူး…
Foundation အနည်းငယ်ကို လက်ချောင်းထိပ်လေးနဲ့ယူပြီး မျက်နှာအနှံ့လိမ်းပေးပါ…ဖုံးအုပ်ချင်တဲ့နေရာတွေကို နှစ်ခါမလိမ်းရလောက်အောင် တခါတည်းနဲ့ပြည့်စုံတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ….
Image Source: www.narscosmetics.com
အညစ်အကြေးနဲ့ဆဲလ်သေတွေကို အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးပြီး ဖြူစင်ချောမွေ့သွားစေမယ့်....
Ultra HD Liquid Foundation လေးသုံးပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းတဲ့မျက်နှာလေး ဖန်တီးကြရအောင်